Sanbaloolshe oo sharaxay sida Farmaajo uga shaqeeyey khilaafka ka dhex billowday mucaaradka - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Sanbaloolshe oo sharaxay sida Farmaajo uga shaqeeyey khilaafka ka dhex billowday mucaaradka
June 9, 2021 at 13:00 Sanbaloolshe oo sharaxay sida Farmaajo uga shaqeeyey khilaafka ka dhex billowday mucaaradka2021-06-09T13:00:20+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyihii hore ee Hey’adda Nabad-sugida NISA Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiia dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka shaqeeyey inay dhexdooda isku soo jeestaan xubnihii mucaaradka ahaa ee sida wadajirka ah uga soo horjeeday nidaamkii Farmaajo.
Sanbaloolshe oo la hadlay Telefashinka Universal ayaa sheegay in xubnaha mucaaradka ay noqdeyn jabhado aakhiritaankii dhexdooda isku soo jeestay, isagoo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey inuu aamusnaan ku kala qeybinayo mucaaradka.
“Yaxaaska marka uu webigu biyo beelo dhulkuu galaa wuu is-duugaa markuu roob yimaadana waa soo baxyaa. Hadda Farmaajo waa is-maskiininayaa waa is-duugayaa wuxuu isku dayayaa in uu iska dhigo nin maxmiyad iyo maskiin ah ragga ay iska soo horjeedaana ay is-tusiyaan waxa isku soo haray in ay ayaga tahay oo ay ayaga isku soo jeestaan,” ayuu yiri.
Sanbaloolshe ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan heysan fursad labaad oo uu mar kale ku noqdo madaxweynaha Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu intaas ku daray in haddii uu Farmaajo mar kale kusoo noqdo xilka madaxweynimo ee Soomaaliya ay taas ka dhignaan doonto sii socoshada colaad sokeeye.
“Farmaajo wax fursad ah uu leeyahay in dib loo doorto ma jirto. Haddii la doortana macnaheedu waa [sii socoshada dagaal sokeeye, kala qeybsanaanta]; yacnii ballaayo sii socota ayaa qoorta lala geli doonaa mooyee xal maka imaanayo,” ayuu mar kale yiri.
Hadalka Taliyihii hore ayaa imaanayo xilli uu soo if baxay khilaaf u dhaxeeyo xubnaha midowga musharixiinta kadib markii xafiiska Ra’isulwasaaraha uu go’aan ka gaaray liiska xubnaha laga saarayo guddiyada doorashada ee tabashada ka jirtay taasoo keentay in xubnaha qaar ee musharixiinta ay soo dhaweeyaan halka qaarna ay cambaareeyeen.
The post Sanbaloolshe oo sharaxay sida Farmaajo uga shaqeeyey khilaafka ka dhex billowday mucaaradka appeared first on Caasimada Online.
« Wasiir Beyle oo kulan la qaatay qaar kamid ah Culimada Soomaaliyeed
Improving living conditions in camps for displaced families in Somaliland »